နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » NINJAGO: လေးပါး Path
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: NINJAGO: လေးပါး Path
ဖေါ်ပြချက်: အ Ninjago ဂိမ်းအဆိုပါလေးဦး Paths အတွက်ကို elemental အင်အားကြီးနှင့် Spinjitzu ကျွမ်းကျင်! Dodge သင့်ရဲ့နင်ဂျာကျွမ်းကျင်မှုထက်မြက်ဖို့ရေခဲတောင်များ sparks နှင့်စကေး! Spinjitzu ၏မာစတာ: Ninjago ကနေလေးနင်ဂျာအဖြစ် Play!
ကစား: 514,695 tag ကို: နင်ဂျာ, နင်ဂျာဂိမ်း, ဆာမူရိုင်း, ဆာမူရိုင်းဂိမ်း, ninjago, ninjago ဂိမ်း, ninjago ဂိမ်းကစား
ရဲတိုက်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှမြင့်မြင့်ကိုတက်ရဖို့ Ninja ကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ လမ်းကိုအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတားအဆီးများနှင့်ရန်သူများကိုထွက်သည် Watch ။
လက်စွပ်၏ Lego အရှင်သည်
အလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အလွန်ကြီးစွာသောစစ်တိုက်စစ်တိုက်ခံရဖို့အကြောင်းပါ။ Frodo နှင့်ဆမ်သူတို့နောက်ဆုံးပါဝါ၏လက်စွပ်နှင့်အတူအမှောင်သခင် Sauron ကိုဖကျြဆီးနိုငျ, ဒါပေမယ့်အချိန်ကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်သည်အဘယ်မှာရှိတောင်ပေါ် Doom ရောကျခါနီးပွီ။ သငျသညျရနျသူတိုက်ခိုက် w ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရမယ်
ဂြိုဟ် x2 1/2 မှ ninjago ကျူးကျော်
ဒါဟာ Planet ကို X2 1/2 တစ်ဦးထံမှကျူးကျော်ပဲ! သင်ဂြိုလ်သားကာကွယ်ရေးယူနစ်အဖြစ်လူသားကိုကယ်တင်ကူညီသို့မဟုတ်တပါးကျူးကျော်အဖြစ်မွကွေီးခိုးကြလိမ့်မည်နည်း
အာဏာကို Rangers သူရဲကောင်းနိုငျငံတျောသညျ
တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးနစ်ခ်ကြယ်တို့သည် featuring အနေနဲ့ EPIC မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းအတွက်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်!
ninjago မြွေဟောက်ကိုက်ခခြှေဲ Lego
သငျသညျစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာ Adventures ကြိုက်? ဒါကြောင့်သင်ဒီဂိမ်းကိုကြိုက်လိမ့်မယ် သင်တစ်ဦးရဲရင့်နင်ဂျာဖြစ်လာနှင့်သင်တို့ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်တဲ့သူကိုရန်သူတို့လှိုင်းတံပိုးနှင့်အတူစစ်တိုက်မယ့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်အလုပ်တခုကိုခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအနိုင်ရဖို့လုံလောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဖြစ်ပါသလား